50 Common Grammar Mistakes in English (9) ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Sunday, August 30, 2015 SayarWinNaingOo No comments
အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းတွေကို များများဖတ်ဖူးတယ်ဆိုလျှင် grammar ကိုတောင် စဉ်းစားဖို့ မလိုဘဲ တန်းပြီး သိနိုင်တာလေးတွေပါ ၊ ခက်တာကို ရှင်းပြလို့ကောင်းပါတယ် ၊ လွယ်တာကျတော့ ဘာကိုရှင်းရမလဲ ဆိုတာကိုပဲ တော်တော် စဉ်းစားလိုက်ရပါတယ် ၊ ရှင်းပြီးတော့လည်း အူလည်ချာပတ် ဖြစ်နေလို့ စိတ်ရှည်ရှည်ဖတ်ပေးကြမှ ရလိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့
Wrong : I came Australia to study English.
Right : I came to Australia to study English.
ကျနော် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ သြစတေးလျကို လာခဲ့ပါတယ်
I came.. ဆိုပြီး Sub နဲ့ verb ရှိရာမှာ came ဟာ ရွေ့လျှားမှုပြတဲ့ကြိယာဖြစ်တယ် ၊ သူ့နောက်မှာ place ဖြစ်တဲ့ Australia ဆိုတာရှိတယ် ၊ ရွှေ့လျှားမှုဟာ နေရာနဲ့ ဘယ်လိုဆက်စပ်မှုရှိတယ်ဆိုတာကို ပြဖို့ proposition of direction တစ်ခုခု ထည့်ပေးရပါမယ် ၊ preposition ရဲ့ အလုပ်ကိုက ဆက်စပ်ပေးရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ to Australia ကို ယူဆပုံ အမျိုးမျိုးရှိနေပါတယ် ..
~ တချို့ဆရာတွေက directional adverb လို့သတ်မှတ်ပါတယ် ၊ အဲဒီတော့
S + V + (O) + D, M, P, T, R ( Direction, Manner, Place, Time, Reason or purpose)ဆိုပြီး စဉ်ပါတယ်
ရွေ့လျားမှုပြကြိယာ verb of movement တွေနောက်မှာ direction adv တွေ ကပ်လိုက်ရပါတယ် ၊ ရွေ့လျားမှုကြိယာတွေကို အောက်နားမှာကြည့်ပါ ..
~ တချို့ဆရာတွေကတော့ သူ့ကို complement (ဖြည့်ပုဒ်) အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်
သူက S + V+ (O) + Complement + M,P,T, R ဖြစ်သွားပါတယ်
I came ..ကျနော်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ ဘယ်ကိုလာခဲ့တယ်ဆိုတာ ဖြည့်ပေးရပါတော့မယ် အဲဒါကြောင့် to Australia ကို ဖြည့်လိုက်ရတာပါ ။
complement (ဖြည့်ပုဒ်) နဲ့ Adverb (ကြိယာဝိသေသန) ရဲ့ ကွာခြားချက်က complement ဟာ ၀ါကျရဲ့ပင်မအူတိုင် (core sentence) မှာပါပြီး ဖြုတ်လို့မရပါဘူး ၊ Adverb ကတော့ အချက်အလက်အားဖြင့် အပိုဖြည့်စွက်ချက်သာ ဖြစ်ပါတယ် မပါလျှင်လည်း ပင်မ၀ါကျက အဓိပ္ပါယ်ရှိနေဆဲပါပဲ ။ အကယ်၍ adverb ကို ဖြုတ်ကြည့်လို့ အဓိပ္ပါယ်ပျက်သွားလျှင် အဲဒါ complement အဖြစ် လုပ်ဆောင်လို့ပါပဲ ..ဥပမာ I go there. မှာ there ကို ဖြုတ်ကြည့်လို့ I go. ပဲ ဖြစ်သွားလျှင် အဓိပ္ပါယ် မရှိတော့ပါဘူး အဲဒါမျိုးဆို there ကို adv လို့ ယူဆတာထက် complement အဖြစ် ယူဆတာက ပိုသင့်တော်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
အခုတော့ မူလ၀ါကျကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင် ..
I came to study English.
..to Australia ကို ဖြုတ်ကြည့်တဲ့အခါ ၀ါကျက မပြည့်စုံပါဘူး
I came to Australia.
.. to study English ကို ဖြုတ်ကြည့်တဲ့အခါ ပြည့်စုံတဲ့ဝါကျဖြစ်ပါတယ်
မြန်မာတွေက ကျနော်လာတယ်ဆိုလျှင် ကျနော် ဒီကိုလာတယ်လို့ ဖြည့်ပြီး အလိုလိုနားလည်နေတဲ့အတွက် come မှာ သိပ်မပေါ်လွင်ပါဘူး ၊ go နဲ့ စဉ်းစားကြည့်ပါဦးလား
I go /to school / to learn.
I go to learn. ၀ါကျမပြည့်စုံဘူး (ကျနော်သင်ယူဖို့သွားတယ်..တဲ့ စကားက အရင်းအဖျားမရှိ အူတူတူနဲ့လို့ ထင်စရာပဲ)
I go to school. ၀ါကျပြည့်စုံတယ် (to school သည် complement)
ရွှေ့လျှားမှုပြကြိယာလေးတွေနဲ့ ဦးတည်ရာပြ ၀ိဘတ်လေးတွေကို နမူနာ ကြည့်လိုက်ပါ
Verbs of movement: move, go, transfer, walk,run, swim, ride, drive, fly, travel, jump
Prepositions of direction tell you where to go. Some examples are to, on, onto, in, and into, across, around, away from, back to, through, towards..
Wrong : It is more hot now.
Right : It’s hotter now.
အခု (အရင်ကထက်) ပိုပြီးပူတယ်
hot, hotter, hottest လောက်ကိုသိလျှင် ရပါပြီ ၊ မသိလျှင် လေ့လာပါ ။
Wrong : You can give me an information?
Right : Can you give me some information?
ကျနော့်ကို သတင်း အချက်အလက် နည်းနည်းပေးပါလား
information က ရေတွက်မရနာမ်ဖြစ်လို့ an information, informationS စသည်ဖြင့်သုံးလို့မရပါဘူး ၊ some information,apiece of information, much information ..စသည်ဖြင့် ရေတွက်မရနာမ်အတွက် သင့်တော်ရာတွဲဖက်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်
Wrong : They cooked the dinner themself.
Right : They cooked the dinner themselves.
သူတို့ဟာညစာကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ချက်ပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်
Singular : myself , yourself (သင်ကိုယ်တိုင်) , himself , herself , itself
Plural : ourselves , yourselves (သင်တို့ကိုယ်တိုင်) , themselves
Wrong : Me and Johnny live here.
Right : Johnny and I live here.
ဒါမျိုး and နဲ့ ဆက်ထားတဲ့ဝါကျတွေမှာ နာမ်စားတွေကို မှန်ရဲ့လားသံသယဖြစ်နေလျှင် စာကြောင်းခွဲကြည့်ပါ
ပထမ၀ါကျကိုခွဲကြည့်ပါ Me lives here and Jonny lives here. လို့ရမယ် Subject နေရာရောက်နေတဲ့ Me ဟာ Object pronoun ဖြစ်နေလို့ မှားပါတယ်.
ဒုတိယ၀ါကျကတော့ Jonny lives here and I live here. လို့ဖြစ်ပြီး
(၁) Subject နေရာမှာရှိတဲ့ I ဟာ Subject pronoun ဖြစ်တဲ့အတွက် မှန်ပါတယ် ။
(၂) နောက်တစ်ချက်က နာမည်တွေဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်နာမ် proper noun တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်
နာမ်စား pronoun တွေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၀ါကျကိုဆက်တဲ့အခါ I ကို နောက်မှာပဲ ထားလေ့ရှိပါတယ်
Jonny and I ...လို့သုံးတယ် ၊ I and Jonny လို့ သုံးလေ့မရှိပါဘူး
He and I လို့သုံးမယ် ၊ I and he လို့ သုံးလေ့မရှိပါ..
ဒီထက် နားလည်ဖို့လွယ်တဲ့နည်းလေးတွေ..တွေးမိလျှင် မျှပေးခဲ့ပါနော်
ဆရာဝင်းနိုင်ဦး Facebook မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။ (ဆရာ ၀င်းနိုင်ဦး ကျန်းမာပါစေ)